मानिसले कति वटा अनुहार सम्झन्छ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
७ कक्षामा पढ्ने किशोरसँग बेपत्ता भइन ३ बच्चाकी आमा
एजेन्सी, चैत ५ । छिमेकी भारतमा तीन बच्चाकी आमा गाउँकै विद्यालयमा ७ कक्षामा अध्ययनरत १६
कुन राशिको सेक्स कस्तो ?
२१ प्रतिशत अविवाहितहरू आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाको राशि पहिला थाहा पाउन चाहन्छन् । यसको कारण
कहिलेकाहीँ पिउनेलाई गाह्रो !
नियमित पिउँछु भन्ने जवाफ आयो भने तुलनात्मक रूपमा तपाईंको बानी ठीक छ भन्ने एक सर्वेक्षणले
जव सवारी चालक अनुमतिपत्रमा मास्क लगाइएको तस्वीर छापिएर आयो
काठमाडौं, फागुन १७ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी लेस्ली पिल्ग्रीम नामक एक महिलाले सवारी चालक परिचय